म्याकको लागि फेसटाइम - म्याकको लागि तत्काल डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुहार समय द्वारा एप्पल इंक सिर्जना एउटा अचम्मको अनुप्रयोग हो. यो भिडियो टेलिफोनी उत्पादन हास्यास्पद भिडियो वा अडियो कलहरू गरेर सजिलो अन्यसँग जडान गर्न प्राप्त गरेको छ. यस अविश्वसनीय अंकित समय अनुप्रयोग उपकरणहरू सबै म्याक ओएस एक्स म्याकिन्टोस कम्प्युटर मा IOS र समर्थन पनि साथ शामिल छ 10.6.6 र पछि.
म्याकका लागि फेसटाइम डाउनलोड गर्नुहोस्
म्याक निःशुल्क डाउनलोड लागि फेसटाइम
म्याक लागि फेसटाइम अनुप्रयोग
म्याक लागि निःशुल्क फेसटाइम
म्याक निःशुल्क डाउनलोड फेसटाइम
Mac OS X लागि फेसटाइम
म्याक लागि फेसटाइम निःशुल्क डाउनलोड
म्याक लागि निःशुल्क फेसटाइम डाउनलोड
यो अनुप्रयोग सुरुमा iPhone को लागि विकसित भएको थियो4प्रयोगकर्ता तर अब कारण यसको तीव्र लोकप्रियता गर्न, यो आईफोनहरु सहित सबै एप्पल उपकरणहरू मा एक निर्मित सुविधा हुन्छ, आईप्याड, म्याक, र आइपड टच. संचार आजको जीवनको अभिन्न भाग हो र अब तपाईं सजिलै तपाईंको व्यापार र व्यक्तिगत जीवनमा साथ सम्पर्कमा रहन आफ्नो म्याक मा अंकित समय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईको म्याक मा, तपाईं केवल आफ्नो इन्टरनेट जडान वा सेलुलर डाटा आवश्यक र त तपाईं सजिलै बस एक क्लिक आफ्नो सम्पर्कमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. अंकित समय को यो प्रतिस्पर्धी अनुप्रयोग तपाईं एक यात्रा मा हुँदा सम्भव यसलाई परिवार वा साथीहरूसँग कुरा गर्न बनाएको छ, आफ्नो कर्मचारीहरु संग सम्पर्कमा रहन सक्छ, प्रस्तुति दिन सक्छ, आफ्नो ग्राहकहरु कुरा र सूची मा जान्छ.
यो परम छ, रचनात्मक, स्पष्ट, सहज र भिडियो वा अडियो कल गर्न सुविधाजनक बाटो र एप्पल उपकरणहरू को दुनिया मा सम्पर्क संग लिङ्क रहिरहनेछ. यस लेखमा आधारभूत डाउनलोड सुविधाहरू बुझ्न सक्षम हुनेछ, उपयोग र आफ्नो म्याकको लागि अंकित समय अन्य घटक.
पीसीको लागि केहि UseFul अनुप्रयोग जाँच गर्नुहोस्
तपाइँ रेकर्डर पीसी
Windows को लागि फेसटाइम
पीसीको लागि wyze क्याम अनुप्रयोग
पीसी को लागी फोन पीई
vms 4500 पीसी को लागी
पीसी विन्डोजहरूको लागि vidmate 7
1 म्याक ओएस लागि डाउनलोड अंकित समय:
2 चरण म्याक एप्पल स्टोर द्वारा फेसटाइम स्थापना गर्न:
2.1 म्याकमा फेसटाइमका लागि महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू:
3 कसरी Mac मा फेसटाइम सेट अप गर्न:
3.1 फेसटाइम सूचना & म्याकमा सुविधाहरू:
3.2 फेसटाइममा सूचना सेटिंग्स:
3.3 मेरो साइटबाट अधिक
म्याक ओएस लागि डाउनलोड अंकित समय:
तपाईंको Mac मा अंकित समय प्रयोग, यसलाई केही क्लिक को बस एक कुरा हो. अनुहार समय आफ्नो म्याक मा एक inbuilt अनुप्रयोग हो. म्याक सबै नवीनतम संस्करण पहिले नै पूर्व-स्थापित छ अंकित समय.
तपाईं के गर्न छ सबै बस आफ्नो iPhone नम्बर र एप्पल इमेल आईडी थप्न छ र आफ्नो म्याक सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको भिडियो टेलिफोनी उपकरणहरू को एक आनन्द उठाउन सक्छौं. तपाईं सजिलै म्याक सहित एप्पल उपकरणहरू प्रयोग गरेर अन्य प्रयोगकर्ताहरूको सम्पर्क थप्न सक्नुहुन्छ, आईफोनहरु, iPad, आइपड, आदि. तपाईं एप्पल को दुनिया मा अन्य प्रयोगकर्ताहरू सम्पर्क गर्न आफ्नो कलर ID रूपमा आफ्नो एप्पल आईडी इमेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
यदि तपाईंसँग तपाईंको म्याकमा इन-बिल्ट फेसटाइम अनुप्रयोग छैन, तपाईं बस म्याक अनुप्रयोग स्टोर गएर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. मैक अनुप्रयोग स्टोर प्रयोग, तपाईं कम्तिमा पनि म्याक ओएस एक्स मा 10.6 वा उच्च. तपाईँ या त आफ्नो डेस्कटप मा म्याक अनुप्रयोग स्टोर प्राप्त गर्न सक्छन् वा तपाईंलाई पूर्व-स्थापित अनुप्रयोग स्टोर मा पाउन सक्नुहुन्छ.
चरण म्याक एप्पल स्टोर द्वारा फेसटाइम स्थापना गर्न:
पत्ता लगाउनू फेसटाइम एपीपी in-build Mac Apple Store को खोजी पट्टीमा फेसटाइम लेखेर वा सिधा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ.
खरीद बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो म्याकको लागि फेसटाइम अनुप्रयोग खरीद गर्न सक्नुहुनेछ.
यो सफ्टवेयर खरीद गर्नको लागि तपाईंको एप्पल आईडी प्रविष्ट गर्नुहोस्
फेसटाइम अनुप्रयोग स्थापना गर्न लागत केवल यसको लागि हो $0.99
यसलाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ, तपाईं म्याक एप स्टोरबाट स्थापना हुनेछ अंकित समय पुरानो संस्करण हो कि. फेसटाइम को नयाँ संस्करण म्याक ओएस एक्स मा उपलब्ध छ 10.6 वा उच्च. यदि तपाईं म्याकको पुरानो संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने मात्र फेसटाइम डाउनलोड गर्न सिफारिस गरिन्छ.
एक पटक तपाईं स्थापित वा तपाईको म्याक मा अंकित समय सफ्टवेयर प्राप्त गरेका छन्, तपाईं सबै अन्य एप्पल उपकरणहरू प्रयोग गर्न असीमित भिडियो वा अडियो कल गर्न सक्छन्.
म्याकमा फेसटाइमका लागि महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू:
या त तपाईं म्याक ओएस संग म्याक हुनुपर्छ वा तपाईं म्याक ओएस एक्स छ 10.6 वा उच्च.
भनेर एप्पल म उपकरणहरू हुनुपर्छ भिडियो वा अडियो कलको लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ सबै सम्पर्क वा म्याक प्रयोग हुनुपर्छ.
चाखलाग्दो कुरा, तपाईं पनि एप्पल वाच प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरूसँग तपाईंको म्याक मा अंकित समय अडियो आनन्द उठाउन सक्छौं.
उचित र छिटो इन्टरनेट जडान गर्न निश्चित तपाईं पूर्ण गुणस्तर आनन्द उठाउन सक्छौं भनेर भिडियो वा अडियो कल रुकावट बिना.
तपाईं आफ्नो एप्पल आईडी यो अनुप्रयोग प्रयोग सुरु गर्न गर्नुपर्छ.
कसरी Mac मा फेसटाइम सेट अप गर्न:
तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग मार्फत अंकित समय जडान सुरु गर्न सबै तल कदम पालना गर्न आवश्यक.
पहिले, तपाईंको Mac मा आफ्नो अंकित समय सफ्टवेयर सुरु. तपाईं म्याक वा देखि अंकित समय स्थापना गरेर पूर्व-स्थापित सफ्टवेयर प्रयोग या त यो गर्न सक्नुहुन्छ म्याक अनुप्रयोग स्टोर
आफ्नो वर्तमान प्रविष्ट स्याउ आईडी र तपाईं आफ्नो आईडी छैन भने, तिमी सक्छौ सिर्जना एक.
पुरा गर प्रमाणिकरण प्रक्रिया
तपाईं आफ्नो जानकारी प्रमाणित मा या त प्राप्त लिंक द्वारा सक्नुहुन्छ आफ्नो इ - मेल ठेगाना वा तपाईंले प्रमाणिकरण प्राप्त गर्न सक्छन् कोड आफ्नो मा फोन नम्बर.
प्रमाणीकरण प्रक्रिया पछि, पर्छ तपाईं फोन नम्बर थप्न र इमेल आईडी अन्य सम्पर्कहरूको तपाईंको पहिलो फेसटाइम कल गर्न सुरू गर्न.
सफ्टवेयर अडियो वा भिडियो कल गर्न आफ्नो प्राथमिकता माग्छ. तपाईं जो तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग जोडिएको प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
अन्य प्रयोगकर्ताहरूको जानकारी राख्नु ई-मेल ठेगाना सहित, नाम वा फोन नम्बर. तपाईं खोज पट्टी यो जानकारी प्रविष्ट गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ.
र अन्ततः, अंकित समय को अनुपम अनुप्रयोग सँग एक गुणवत्ता फोन गर्न टेलिफोन वा क्यामेरा ट्याप गर्नुहोस्.
फेसटाइम सूचना & म्याकमा सुविधाहरू:
तपाईं अन्य एप्पल प्रयोगकर्ता जोडिएको गर्न वा तपाईँले एक कल प्राप्त यदि छन् र बाहिर फेला आफ्नो म फोन वा म प्याड छैन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं चाँडै तपाईँको म्याक कल धाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
यसबाहेक, तपाईं आफ्नो कल को बीचमा र त्यसपछि कुनै पनि सेटिङ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो माउस सार्न र विकल्प कुनै पनि क्लिक
तपाईं माइक मौन वा आवाज खोल्ने सक्नुहुन्छ
तपाईं र तपाईंको प्राथमिकताहरू आधारमा बन्द भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं स्पष्ट चित्र हेर्न आफ्नो स्क्रीन आकार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ
के तपाईं चाहेको बेलामा आफ्नो कल अन्त्य
यदि, तपाईं आफ्नो Mac मा अंकित समय को कुनै पनि सेटिङ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईं सजिलै त्यसपछि त सूचनाहरू जाने सिस्टम प्राथमिकताहरू जाने एप्पल मेनुमा गएर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ. एक विन्डो तल जस्तै खुला प्राप्त हुनेछ:
फेसटाइममा सूचना सेटिंग्स:
तपाईं सजिलै वा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंलाई रुचि कुनै पनि सुविधा बन्द. सूचना को ध्वनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, अनुप्रयोग प्रतिमा, सूचना अद्यावधिक र अधिक
अर्को आकर्षक सुविधा छ, तपाईं समूह फेसटाइम अडियो वा भिडियो कल मार्फत समूह कल गर्न सक्नुहुन्छ. सम्म 32 सम्पर्क समूह कलको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो कर्मचारीहरु लागि धेरै उपयोगी छ, संगठन, र ब्रान्डहरु. यो तिनीहरूलाई एउटा क्लिकमा दुनिया भर सबै कर्मचारीहरु र ग्राहकहरु जडान गर्न एड्स.
यहाँ लेखसँग म्याकमा सेटअप र फेसटाइम प्रयोग गर्न विस्तृत जानकारी छ. मलाई आशा छ लेख तपाईं को लागि सूचनात्मक गरिएको छ र तपाईंले यो टुक्रा उपयोगी डाटा पायो. तपाईं कुनै प्रश्न छ भने, यसलाई तलको कमेन्ट बक्समा साझेदारी गर्नुहोस् र तपाईंको साथीहरू र परिवारसँग साझा गर्नुहोस्.
Download Mainstage for PC Windows & म्याक 2020
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम